GOOGLE က CHROME အတွက် THEMES - CHROME ကို GOOGLE - 2019
Google က Chrome အတွက် themes များပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို
အတော်များများကအသုံးပြုသူများအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝကိုသင့်အရသာများနှင့်လိုအပ်ချက်များကို fit မှချိန်ညှိပါကခွင့်ပြုပါလျှင်, ထို program personalize မှကြိုက်တယ်။ သငျသညျကို Google က Chrome browser ကိုများအတွက်စံဒီဇိုင်းဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဥပမာ, ထို့နောက်သင်အမြဲအသစ်တခုဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် interface ကို refresh ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
Google Chrome က - တိုင်းအခါသမယများအတွက်ဖြည့်စွက်, ဒါပေမယ့်လည်းဘရောက်ဇာကိုဒီဇိုင်းများ၏မဟုတ်ဘဲမှိုင်းမူရင်းဗားရှင်းကိုတက်အလှဆင်ရန်လိမ့်မည်ဟု themes များအမျိုးမျိုးမသာဖြစ်လိမ့်မည်သည့် built-in စတိုးဆိုင် extension များရှိပြီးတစ်ဦးလူကြိုက်များ browser ကို။
ကို Google က Chrome browser ကို Download လုပ်ပါ
Google Chrome ကိုအတွက် order ကိုပြောင်းပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
1. ပထမဦးစွာကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးသင့်လျော်သောအခြားရွေးချယ်စရာဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်စတိုးဆိုင်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ပေါ်လာသော Menu ထဲမှာ menu ကိုခလုတ်ပေါ်တွင် browser ၏အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့ scroll "ပို tools များ"ပြီးတော့ပွင့်လင်း "Extensions".
2. ပေါ်လာသောစာမျက်နှာ၏အဆုံးမှဆင်း သွား. , link ကို click နှိပ်ပြီး "ပိုပြီး extensions တွေကို Get".
3. extensions စတိုးဆိုင်ပြသနေသည်။ လက်ဝဲ pane ထဲကမှာ tab ကိုမှသွားလာ, "Themes".
4. ခေါင်းစဉ်တွင်အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲထားခဲ့သည်, မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာ။ တစ်ခုချင်းစီဆောင်ပုဒ်ခေါင်းစဉ်ခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသော, တစ်ဦး thumbnail ကို preview ကိုရှိပါတယ်။
5. သင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောခေါင်းစဉ်ကိုရှာဖွေပြီးတာနဲ့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြရန်လက်ဝဲ mouse ကို button ကို click လုပ်ပါ။ ဒီနေရာတွင်, ပေးထားသောဆောင်ပုဒ်၏ browser ကို interface ကို screenshots များတန်ဖိုးထားနိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစူးစမ်းဖို့, အလားတူအရေခွံကိုရှာပါ။ သင်တစ်ဦးဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားလိုပါကခလုတ်ကို၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Install".
6. ရှေးခယျြသောဆောင်ပုဒ်အနည်းငယ်အချိန်လေးပြီးနောက် installed လိမ့်မည်။ ထိုနညျးတူ, သင် Chrome အတွက်မဆိုအခြားတော့အရောင်း themes များတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ကို default ဆောင်ပုဒ်ကိုပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျမူလဒီဇိုင်း Theme ကိုပြန်ရချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် menu ကိုအင်တာနက် browser ကိုသွားနှင့်သွားပါ "Settings" ကို.
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "ပုံပန်းသဏ္ဍာန်" အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဆောင်ပုဒ် default မှ Reset"ထိုအခါ browser ကိုလက်ရှိဆောင်ပုဒ်ကိုဖျက်ပစ်ရန်နှင့်စံထားမည်။
သင့်ရဲ့အရသာပေါ်တွင် Google Chrome ကို browser ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုပြုပြင်ကြည့်, ဒီက Web Browser ကိုအသုံးပြုပါက ပို. သာယာသောအရည်ပျော်ပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: Curso de SEO. SEO On Page. 11 - Headers html (စက်တင်ဘာလ 2019).